Thwebula LinkedIn 4.0.89 isizulu – Vessoft
LinkedIn – a isofthiwe ukufuna umsebenzi ikhokhwe kakhulu inethiwekhi ethandwayo social lapho uhlanganisa izinkampani nosomabhizinisi bangaphezu kwezigidi ibhizinisi. LinkedIn ikuvumela ukuba ulayishe phindela yakho siqu ukuze search ngempumelelo ngaphezulu emisebenzi ezisemagumbini ezahlukene zomhlaba. Isofthiwe iqukethe uhlu enkulu izinkampani kanye nabameli babo emikhakheni ehlukahlukene eyenza umsebenzisi sikhethe kahle mkhakha kanye izikhundla. LinkedIn isekela izici izindinganiso zokuxhumana kanye ubonisa izindaba ezihlukahlukene emakethe yomsebenzi elihlobene izithakazelo umsebenzisi. Futhi LinkedIn kwenza ukubukela seminar noma Startups ehlukahlukene kanye ukubuka izihloko mayelana innovations ezithakazelisayo neminyaka yokugcina.
Ukufuna i omsebenzi futhi nokukhulumisana kanye nabaqashi
Ukubuyekezwa izinkampani eziningi nabaholi ahlukahlukene
Isibonakaliso idatha yomuntu siqu nokuhlangenwe nakho komsebenzi
Buka izindaba ezithakazelisayo emakethe umsebenzi
Amazwana on LinkedIn:
LinkedIn Ahlobene software:
English, Afrikaans, Français, Español... Flipboard 3.3.13
English, Français, Español, Português... Psiphon 145